Tag: robocalls | Martech Zone
Robocalls- Anyị agaghị echefu ha!
Wednesday, September 9, 2009 Tọzdee, Febụwarị 9, 2017 Adam Obere
Anyị niile na-enweta ha, na ọ fọrọ nke nta ka mba niile kpọọ ha asị, oku na-akpasu iwe na-akwalite ụfọdụ ngwaahịa ma ọ bụ ihe omume na-egwu egwu ma ọ bụ, nke ka njọ, na-agwa gị okwu n'olu igwe. Ọ dị mma, FTC etinyela iwu na ụkpụrụ ọhụụ gbasara itinye oku ndị a. Jon Leibowitz, Onye isi oche nke FTC, nwere okwu ọjọọ mara mma n'okwu a. Ndị ahịa America emeela ka o doo anya na ihe ole na ole na-akpasu ha iwe karịa